'कहिल्यै नबिक्ने लामखुट्टेका औषधी पनि बिक्न थाले' | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
पुल्चोकस्थित राकेश स्टोरका सञ्चालक राकेश महर्जन हिजोआज अचम्मित छन्। सिजन सकिए पनि लामखुट्टे टोकाइबाट बच्न प्रयोग गरिने औषधीहरू किन्नेको संख्या बढेको बढ्यै छ।
लामखुट्टे भगाउने धूप, लिक्विड, क्रिम, स्प्रे लगायतको बिक्री यो वर्ष धेरै भएको उनी बताउँछन्।
‘सिजनमा दिनको ५/६ जना मात्र किन्न आउँथे। एक हप्तादेखि त दिनकै २० जना जति आउँछन्,’ राकेशले भने, ‘यहाँ स्टक कम भइसक्यो। अरू ल्याएर राखौं भनेको अफसिजन भएर उत्पादन नै भएको छैन रे।’
झम्सिखेलको सुमन स्टोरका सञ्चालक सुमन श्रेष्ठको अनुभव पनि त्यस्तै छ। उनले पनि हिजोआज दैनिक १०–१५ जनालाई यस्ता औषधी बेचिरहेका छन्।
‘सिजनमा त दिनमा १०–१५ वटा बेच्नु सामान्यै हो। तर भदौको अन्तिममा लामखुट्टेबाट बच्ने औषधी यति धेरै बिकेको नौलो हो,’ उनले भने।
अरू बेलामा कमै प्रयोग हुने र बिक्न मुश्किल हुने औषधीहरू पनि यो अहिले बिक्री भइरहेको उनीहरू बताउँछन्।
राकेश र सुमन दुई प्रतिनिधि व्यापारी मात्र हुन्।
अहिले प्रायः किराना पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोरदेखि मेडिकल हलसम्मको अवस्था यस्तै छ। पछिल्लो समय उपत्यकासहित देशभर डेंगी प्रकोप बढ्दै गएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। झन् डा. सन्दुक रूइत, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल लगायत देशका चर्चित व्यक्तिहरूलाई समेत डेंगी संक्रमण देखिएपछि लामखुट्टे टोकाइबाट बच्न प्रयोग गरिने औषधीको माग ह्वात्तै बढेको छ।
‘पहिले अलि बिक्ने भनेको लिक्विड थियो। अचेल त क्रिमदेखि स्प्रेसम्म धेरै बिक्न थालेको छ,’ राकेशले भने।
धेरैले माग बढेपछि बजारमा भाउ बढाउन यी औषधीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको टिप्पणी समेत गर्दै आएका छन्। राकेश यसमा सहमत छैनन्।
उनका अनुसार मात्रा र कम्पनी हेरेर लामखुट्टे भगाउने धुपको ३५, बिजुलीमा जोड्ने लिक्विडको एक सयभन्दा बढी, क्रिम(ओडोमस)को ८० र स्प्रको १३० देखि ५००सम्म पर्छ। पसलअनुसार मूल्य केही फरक पर्न सक्ने उनले बताए।
‘बजारमा नपाइएको हुनसक्छ। हामीले पनि ल्याउन खोज्दा पाइरहेका छैनौं। अफसिजनमा कम्पनीले नै धेरै उत्पादन नगर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘सिजनमा उत्पादित सामानबाटै अहिलेसम्मको बजार धानिएको हो।’
औषधीको मागसँगै बजारमा लामखुट्टे मार्न र टोकाइबाट बच्न विभिन्न प्रकारका उपकरणहरू पनि पाइन थालेका छन्।
यसमध्ये ‘र्‍याकेट’ खुब चल्तीमा छ। यो बिद्युतीय ब्याटलाई चार्ज गरेर प्रयोग गरिन्छ। यसको जालीमा परेपछि लामखुट्टेदेखि सबै किसिमका कीराकिरी मर्छन्।
यस्तै अर्को साधन हो ‘प्याच’। लामखुट्टे प्याच भनिने यो साधन लुगामा टाँस्ने स्टिकर, झुन्डाउने वा घडीका रूपमा पाइन थालेका छन्। विशेषगरी केटाकेटीका लागि लक्षित यी प्याच सामान्य किरानामा हत्तपत्त पाइँदैन। मेडिकल वा मलहरूका केही पसल वा जापानी-चिनियाँ सामानहरूका पसलमा भेटिन्छ। स्कुले केटाकेटीहरूलाई यस्ता प्याच लगाएर पठाइदिए उनीहरू केही हदसम्म टोकाइबाट बच्ने बिक्रेताहरूको दावी छ। यस्ता प्याचको मूल्य स्टिकर वा घडी स्वरूप हेरेर फरक दुई सयदेखि तीन सय हाराहारी पर्छ। यसको काम गर्ने अवधि पनि महिनौं हुने बिक्रेताहरू दावी गर्छन्।
पछिल्लो समय डेंगीले सबैलाई तर्साएको छ। संक्रमण पनि बढ्दो छ। दैनिक करिब ४/५ सय जना परीक्षणको लागि आउने र करिब ६० प्रतिशतलाई डेंगी संक्रमण देखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोला बताउँछन्।
‘यो फैलिरहेको छ। जचाउँन आउनेको संख्या आकाशिरहेको छ,’ उनले भने।
डेंगी प्रकोप भाइरल भइरहे पनि यस्ता औषधीहरू धेरै प्रयोग गर्न नहुने डा. बाँस्तोला बताउँछन्।
‘यस्ता औषधीले लामखुट्टेको टोकाइबाट त बचिएला तर अरु समस्या निम्त्याउन सक्छ। धूप बालेर सुत्यो भने निस्सासिन सक्छ। बरू झ्यालढोकामा जाली हाल्ने, कतै पानी जम्न नदिने, लामखुट्टेका लार्भा नस्ट गर्ने लगायत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाहिर जाँदा पूरा बाहुला भएको लुगा लगाउने र शरीरको खुला भागमा क्रिम (ओडोमस जस्ता) लगाउनु पर्छ।’
समाचार'कहिल्यै नबिक्ने लामखुट्टेका औषधी पनि बिक्न थाले'
गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक गर्न थाल्यो पर्यटकको तथ्यांक